Umzimveliso wenyama efriziweyo - China Abavelisi benyama benyama, abaxhasi
Ukutya okubandayo kwahlulwe kwaba kukutya okubandayo kunye nokutya okungumkhenkce. Ukutya okukhenkciweyo kulula ukukugcina kwaye kusetyenziswa kakhulu kwimveliso, ukuhanjiswa kunye nokugcinwa kokutya okonakalayo njengenyama, iinkukhu, iimveliso zasemanzini, ubisi, amaqanda, imifuno kunye neziqhamo; isondlo, ifanelekile, isempilweni kwaye iyonga; Imfuno yentengiso inkulu, ihlala kwindawo ebalulekileyo kumazwe aphuhlileyo, kwaye ikhula ngokukhawuleza kumazwe asaphuhlayo. Ukutya okupholileyo: ayidingi kubekwa emkhenkceni, ...
Intshayelelo yemveliso Izinto zokwenza imveliso zivela kwiindawo zokuxhela kunye nakumashishini obhaliso lwangaphandle e-China. Ukungeniswa kwempahla eluhlaza ikakhulu isuka eFrance, eSpain, eNetherlands imigaqo yesilayidi kunye nedayisi, nxiba umtya amanqaku Umlinganiso wamafutha ukuya kubhityile ngu-3: 7, utyebile kodwa awunamafutha. Faka isicelo kwisitishi Ukulungiselela ukutya, ikhonkco lokutyela kunye namanye amashishini. Iimeko zokugcina iCryopreservation engezantsi -18 ℃ Indlela ebandayo yokuQinisa indlela yokusonga ifilimu, iCPF yadibana ...
Intshayelelo yemveliso Izinto zokwenza imveliso zivela kwiindawo zokuxhela kunye nakumashishini obhaliso lwangaphandle e-China. Izinto ezingenisiweyo ezivela kwamanye amazwe ikakhulu zivela eFrance, eSpain, eNetherlands, njl njl. Ukucaciswa okungakumbi, yamkela amanqaku esiko Umlinganiselo wamafutha ukutyeba ngu-3: 7, utyebile kodwa awunamafutha. Faka isicelo kwisitishi Ukulungiselela ukutya, ikhonkco lokutyela kunye namanye amashishini. Iimeko zokugcina Cryopreservation ngezantsi -18, Bio-ngumkhenkce protein technology Biological ngumkhenkce protein t ...